CopyQ 4.1.0: Maxaa ku cusub maamulaha sabuuradda sare | Laga soo bilaabo Linux
CopyQ 4.1.0: Maxaa ku cusub maamulaha sabuuradda sare
Marka la eego taas, in yar 2 sano ka hor ayaan sahaminay a qalab qabow oo waxtar leh wac "CopyQ" markii uu ku jiray 3.5.0 version, maanta waxaan sahamin doonnaa taas wararka wuxuu noo keenaa kii ugu dambeeyay iyo nooca xasilloon ee hadda jira 4.1.0.
Kuwa aan garanayn "CopyQ", kani waa mid iskudarka arjiga codsiga taasi waxay u shaqaysaa sidii a maamulaha sabuuradda sare oo leh hawlaha tafatirka iyo qorista.
Iyo sida caadiga ah, ka hor intaadan si buuxda u gelin mawduuca, kuwa xiiseynaya aaladaha noocan ah, taas oo ah, maamulayaasha sabuurada sare, laakiin loogu talagalay boosteejada (consoles) waxaan kugula talineynaa sahaminta la xiriira post hore leh mawduucaas. Taasna waxaan isla markiiba uga tagi doonaa hoosta isku xirka:
"Xclip waa codsi noo saamaxaya inaan galno qoraalka sabuuradda, oo aan ka soo qaadanno qoraalka xariijinta taliska. Qoraalka dib loo soo ceshay waxaa laga yaabaa inuu soo galay codsi kale. Sidoo kale, qoraalka la geliyay sabuuradda iyada oo loo marayo xclip waxaa adeegsan kara codsi kasta oo kale. Xclip: Maaraynta sabuuradda laga soo bilaabo khadka taliska." Xclip: Ka maareynta sabuuradda laga soo bilaabo khadka taliska
xclip: Kaadiyeynta kabadhka xariiqda taliska
1 CopyQ: Nooc cusub oo leh shaqooyin cusub
1.1 Waa maxay CopyQ?
1.2 Tilmaamaha Hadda
1.3 Maxaa ku cusub nooca hadda ah 4.1.0
1.4 Sawirada shaashada
CopyQ: Nooc cusub oo leh shaqooyin cusub
Waa maxay CopyQ?
"AMAn horumarsan oo iskutallaab leh iyo maareeyaha sabuurad furan oo leh shaqooyin sida taariikhda, raadinta iyo tafatirka, iyo taageeridda qoraalka, HTML, sawirrada, iyo qaab kasta oo kale oo caado u ah. CopyQ waxay bixisaa sifooyinka tafatirka iyo qorista. La soco sabuuradda nidaamka oo keydso waxyaabaha ku jira tilmaamaha caadada ah. Sabuuradda kaydsan ayaa si toos ah loo koobiyeyn karaa loona dhejin karaa codsi kasta."
CopyQ - maareeyaha kilibbarka leh astaamo horumarsan
La 4.X taxanaha «CopyQ» wuxuu ku daraa kuwa badan sifooyinka aasaasiga ah ee hadda jira 10ka soo socda:
Waxay bixisaa taageero iskudhaf ah oo loogu talagalay Linux, Windows, iyo OS X 10.9 iyo wixii ka sareeya.
Kaydi qoraalka, HTML, sawirrada ama qaab kale oo caado u ah.
Si dhakhso ah u baari oo u shaandhee shayada sabuuradda.
Waxay u oggolaaneysaa inay kala soocdo, abuurto, tafatirto, tirtirto, nuqul / dhejiso oo ku jiido waxyaabaha ku jira dhex -dhexaadkeeda.
Waxay bixisaa awood ay ku darto qoraalada ama summadaha walxaha la maamulo.
Waxay leedahay jid-gaagaabyo-gaaban oo leh amarro la beddeli karo.
Fududeynta ku dhejinta shay -gaaban ama saxaarad ama daaqadda weyn.
Waxay leedahay muuqaal si buuxda loo habeyn karo.
Waxay leedahay is -dhexgal xarriiq talis sare ah iyo qoraallo.
Taageerada tifaftiraha Vim-sida fudud iyo gaagaaban.
Maxaa ku cusub nooca hadda ah 4.1.0
Inta, the nooca hadda deggan ka hooseeya lambarka 4.1.0 Taariikhda 23 / 04 / 2021 wuxuu noo keenayaa astaamo badan oo cusub, kuwa soo socda 10:
Nidaamkii hore ee wargelinta ayaa hadda la adeegsan karaa halkii laga heli lahaa ogeysiisyada hooyo / nidaamka. Tan waxaa lagu curyaamin karaa tabyada ogeysiisyada ee dookhyada.
Faylka qaabeynta dheeraadka ah ee ogeysiisyada si otomaatig ah looma abuuri doono.
Qoraallada, sheyga konsole waxaa loo isticmaali karaa qorista, cabbirka waqtiga dhaafay, iyo sheegidda xaaladaha.
Liiska dhammaystirka amarka waxaa ku jira liis dhammaystiran oo ah shay / shaqooyin shay / shaqooyinka qoraalka iyo sharraxaad ka wanaagsan.
Amarka wada -hadalka iyo amarrada wada -hadalku hadda ma beddelaan% 2% 9. Tanina waxay u oggolaaneysaa gudbinta URL -yada iyada oo aan loo baahnayn in laga baxsado jilayaasha summada leh sida% 20 ama% 3A.
Syntax iftiiminaya qiyamka hexadecimal iyo boolean ee tifaftiraha taliska.
Ku sax dhaqdhaqaaqa daaqada weyn shaashad kale.
Daaqadaha: Ogeysiisyada Dhaladka ayaa naafo ah Windows 7. Tani waxay hagaajineysaa shilka sababo la xiriira sifooyin aan la taageerin. Oo hagaajiyay shil markii la xirayo mawduucyada qaarkood.
Loogu talagalay Wayland: Waxay dib u soo celineysaa joometerikii ugu dambeeyay ee la kaydiyey daaqad (maadaama helitaanka shaashadda hadda aysan shaqeynin).
Dhismaha Windows MinGW ayaa mar kale la heli karaa (ma jiro taageero ogeysiis hooyo).
Ka dib markii aan rakibidda by amar amar marka xigta, waa sidaan u eegno "CopyQ" ordaya in our GNU / Linux Distro:
Nota: Siyaabaha kale ee rakibidda, fadlan sahamiya kuwa soo socda isku xirka.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sida loo isticmaalo "CopyQ", labadaba laga soo bilaabo garaafkeeda garaafka, iyo khadka taliska, xusuusnow inaad booqato galitaankeenii hore "CopyQ" ama sahamin xiriiriyeyaasha soo socda:
Bogga rasmiga ah ee GitHub
Qeybtii ugu dambeysay ee sii deynta ee GitHub
"Maaddaama ay tahay kabadh, dalabkii horeyba u shaqeynayay wuxuu bilaabi doonaa inuu shaqeeyo isla marka aan wax ka beddeleyno dukumiinti ama aan marinno shabakadda" CopyQ - maareeyaha kilibbarka leh astaamo horumarsan
Soo koobid, sida la arkay "CopyQ" waa beddel waxtar leh oo ku siin doona GNU / Linux Distro una qalab maamul oo horumarsan, haddii aadan rabin inaad isticmaasho arjiga caadiga ah, oo inta badan adeegsada dhammaan Distro y Deegaanka Desktop.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » CopyQ 4.1.0: Maxaa ku cusub maamulaha sabuuradda sare
ROS: Nidaamka hawlgalka ee Robot -yada - Qaab dhismeed il furan
Loc-OS iyo Cereus Linux: Beddelka iyo jawaabaha xiisaha leh ee antiX iyo MX